တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၉ မေ ၂၈၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၃
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Thomas Kari Neisinger ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ပထမအတွင်းဝန် Mr. Frank Thierfelder တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ရခိုင်ဒေသပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ နောက်ခံ အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံက ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေမှန်များ၊ ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်း၍ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်က ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတကာနှင့် မိတ်ဝတ်မပျက် ဆက်ဆံရေး၊ ဘက်မလိုက်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး စသောမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒများအတိုင်း တပ်မတော်က အလေးထား လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်သည် ပြည်သူကြားမှ ပေါက်ဖွားလာသော ပြည်သူ့တပ်မတော်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိကာလတွင် ပြည်သူများက ရွေးချယ်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ငြိမ်ခိုင်မာရေးနှင့် နိုင်ငံတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးအတွက် တပ်မတော်က အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ကဏ္ဍတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်နေရသည့် အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Thomas Kari Neisinger ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိးထြဋ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ ပထမအတြင္းဝန္ Mr. Frank Thierfelder တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။
ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ရခုိင္ေဒသပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမွန္မ်ား၊ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ တပ္မေတာ္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရး၊ ဘက္မလုိက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး စေသာျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ားအတုိင္း တပ္မေတာ္က အေလးထား လုိက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္ၿငိမ္ခုိင္မာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး က႑တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံ (ရုပ်သံသတင်း)
ရုရှားနိုင်ငံတွင် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း၊ ပါရဂူသင်တန်းနှင့် Doctor of Science သင်တန်းများ တက်ရောက်နေသည့် သင်တန်းသားအရာရှိများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား ၊ Zvezda ရုပ်သံဌာနနှင့် Russia Today သတင်းဌာန၏မေးမြန်းမှုများဖြေကြား၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးက တည်ခင်းဧည့်ခံသည့်ညစာစားပွဲ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက် (ရုပ်သံသတင်း)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ပါဠိတက္ကသိုလ် ညောင်တုန်းကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)မိသားစုများနှင့်စေတနာရှင် ပြည်သူများက ဆွမ်းဆန်တော်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ဆေးနှင့် ဆွမ်းပဒေသာပင်အလှူငွေများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး(ရန်ကုန်)သို့ နဝကမ္မဘက်စုံ ပဒေသာပင်အလှူငွေများ နှင့် စားသောက် ဖွယ်ရာများလှူဒါန်း